Fihetsiketsehana An’arivony Teny An-dalamben’i Kashmir Taorian’ny Namonoan’ny Tafika Indiana Sivily Efatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2018 3:08 GMT
Ireo vehivavy Kashmiri nihiaka teny filamatra manohitra an'i India nandritra ny fandevenana mpitolona (mitam-piadiana) ao an-toerana maty nandritra ny fifandonana tamin'ny tafi-panjakana tao atsimon'i Kashmir. Sary avy amin'ny mpanoratra, Instagram.
Olona enina no namoy ny ainy, anisan'izany ny sivily efatra, nandritra ny fifandonana voalaza fa nisy teo amin'ireo milisy sy ny tafika indiana tao amin'ny faritr'i Pohan ao Shopian, distrika iray ao Kashmir tantanin'i India.
Nilaza ireo manampahefana fa nandritra ny alin'ny 4 martsa 2018, nanafika ny toeram-pisafoan’ ny tafika Indiana teo ivelan'ny toby miaramila ao Shopian ireo olona hitan'izy ireo fa milisy, ka nitarika ny miaramila hanafay.
Vakio bebe kokoa: Vahoaka Kashmiri Mifanandrina amin'ny Fanjakana Indiana
Nitarika hetsi-panoherana tampoka manohitra an'i India sy ny fanakatonana orinasa manerana ny lohasahan'i Kashmir, izay ao anatin'ny herisetra nanomboka tamin'ny fipoahan'ny fikomiana manohitra ny fitondràna Indiana tany am-piandohan'ny taona 1990 ny famonoana ireo sivily efatra. Ho setrin'izany, nosakanan'ny manampahefana ireo tolotra tahiry finday ao amin'ireo tanàna be mponina indrindra, ary nahenany ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana ao amin'ny faritra hafa ao amin'ny lohasaha mba hisorohana fihetsiketsehana bebe kokoa. Nomena baiko mba hikatona ny sekoly ary naato ny tolotra an-dalamby.
Nitatitra ny mpitondratenin'ny tafika iray tany am-boalohany fa nisy nanafika avy ao anaty fiara ny toeram-pisafoan'ny polisy ary namaly ny miaramila. Hita faty tao anatin'ilay fiara, ny “mpampihorohoro” iray sy “mpiasa telo ambonin'ny tany”, teny fampiasan'ny mpitandro filaminana Indiana iantsoana ireo olona manohana ny mpikomy Kashmiri. Fantatra fa i Suhail Khalil Wagay, Mohd Shahid Khan, ary Shahnawaz Ahmad Wagay ireo sivily telo ireo.
Nolavin'ireo mponina ao an-toerana avy hatrany ny fizirizirin'ny tafika fa milisy mpanampy i Suhail Khalil Wagay, Mohd Shahid Khan sy Shahnawaz Ahmad Wagay, nilaza tamin'ireo tranonkalam-baovao tsy miankina Scroll.in ireo mponina fa tsy manana rohy amin'ny vondrona milisy ireo tovolahy kanefa dia novonoina.
Namazivazy ilay mpanabe, Ashok Swain:
Ho an'ny Tafika ao Rawat, toa tsy misy sivily ao Kashmir – fa na milisy, na manome fanohanana ara-pitaovana ho an'ireo vondrona milisy ianao.
Ny ampitso maraina, hita faty 50 metatra miala ny toerana ny vatana sivily iray hafa, fantatra amin'ny anarana hoe Gowhar Ahmad Lone, 24 taona. Notifirina in'efatra i Lone.
Manohy ny fianarany ambony ao amin'ny Oniversiten'i Nagpur ao amin'ny fanjakana Indiana, Maharashtra i Lone. Nilaza tao amin'ny tranokalam-baovao tsy miankina,The Wire i Mudasir Ahmed, rain'i Lone hoe:
Tao anatin'ilay fiara ny vatany saingy tsy nisy marika rà teny amin'ny seza na toeran-kafa. Naratran’ ny bala ny tao an-damosiny saingy tsy nisy marika bala teny amin'ny seza nahitana ny fatiny. Tsy nisy rà niteté ihany koa teny amin'ny seza. Mino aho fa novonoina tany ivelan'ny fiarany izy na nentin'ny tafika tao amin'ny tobin'izy ireo ary novonoin'izy ireo tao ary naveriny tao anaty fiara ny vatany.
Lehilahy iray hafa indray, fantatra fa milisy no hita faty ihany koa ny ampitso maraina tao amin'ny farihy 12 kilometatra miala eo amin'ny toerana.
Fotoana fohy taorian ‘ny famonoana, nanao antso hanakatonana ny lohasaha ireo mpitarika ny hetsika manohitra an'i India. Fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny tanora no notaterina avy amin'ny tanàna maro.
Nitifitra nahafaty tanora telo ny Mayhem ao #Shopian! #Army Suhail Wagay, Shahid Khan, Shahnawaz Wagay izay samy sivily nandeha fiara. Manameloka mafy ity herisetran'ny tafika ity ny JRL & ny vahoakan'i Kashmir ary hanatontosa fitokonana feno rahampitso mbma haneho ny alahelony lalina sy ny hatezerana.
Notoherin'ny lehiben'ny governemanta, Mehbooba Mufti ny fanambarana nataon'ny tafika Indiana:
Sahiran-tsaina tanteraka noho ny fahafatesana sivily maro tratran'ny fifampitifirana tao Shopian. Miara ory amin'ny fianakavian'ny maty.
Taorian'ny fanambaràny, namaly ny tafika Indiana nandritra ny valan-dresaka ho an'ny gazety ary nilaza fa nanadihady izy ireo raha “mpiasa ambonin'ny tany” ireo sivily maty na tsia.
Mpanao gazety Rita Paul nisioka hoe:
Toeram-ponenan'ny olona an'arivony tapitrisa na miampy ireo miafina i #Kashmir. Mbola tsy maty ny fahazarana taloha eo amin'ny Mpitandro ny Filaminana. Tsy mba liana amin'ny zon'olombelona na ny fandraisana andraikitra i India. Tiany ny mifehy an'i Kashmir amin'ny alalan'ny tahotra. Ny fahadisoan-kajin'izy ireo dia tsy mana-tahotra ny Kashmiris
Fantatra fa hisokatra indray ny sekoly taorian'ny fialan-tsasatry ny ririnina naharitra telo volana, fa tsy noho ny korontana. Nogadrain'ny polisy ao an-toerana ny mpitarika ny Fanoherana Yasin Malik raha niezaka nanao diabe manohitra ny famonoana tao afovoan-tanànan'i Srinagar, renivohitra fahavaratra ao amin'ny fanjakana.
Maro ireo olona niditra media sosialy, miampanga ny fahanginan'ny fampahalalam-baovao Indiana manoloana ny olana.
Ankoatra ny @shammybaweja, tsy nisy tonian-dahatsoratra na mpamakafaka “liberaly” nilaza na dia teny iray momba ny loza tao #Shopian izay, na dia amin'izao fotoana izao aza, milaza ihany koa ny Tafika fa sivily izy ireo. Lahatsoratra am-baovao mahafinaritra azo amidy i #Kashmir
Nandritra ny telopolo taona, nangataka ny zo hanaovana fitsapa-kevi-bahoaka momba ny fahaleovan-tenany ireo vahoaka ao amin'ny Lohasaha Kashmir. Tamin'izany fotoana izany, olona maherin'ny 68.000 no maty nandritra ny fitroarana tsindraindray sy famoretana taorian'izany. Voampanga tamin'ny fanitsakitsahana zon'olombelona marobe ny tafika indiana, anisan'izany ny fanjavonan'ireo olona 8.000 mahery.
Na dia teo aza ny fanadihadiana marobe notontosain'ny governemanta tamin'ny tranga toy izany, tsy nitarika fanenjehana izany, indrindra noho ny Lalànan'ny Fahefana Manokan'ny Tafika (AFSPA) izay miaro ny miaramila voampanga amin'ny famonoana tsy ara-dalàna. Ny AFSPA dia manome zo ho an'ny miaramila mba hitifitra sy hamono; misambotra olona manomboka amin'ny faha-12 taona amin'ny fampiasan-kery sy tsy misy didy fampisamborana; miditra sy mikaroka amin'ny toerana rehetra ary manajanona sy mikaroka izay fiara rehetra; mibodo sy manimba fananana amin'ny asa fisahanana rotaka ary managadra Kashmiris mandritra ny roa taona tsy misy fiampangana azy ireo.